22/09/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Raha variana tamin’ny fiarahana tamin’ireo mpanakanto mpiangaly rock hafa i Nini, hiverina indray miaraka amin’ireo ekipany ao amin’ny tarika Kiaka izy, ary hanolotra seho takariva etsy amin’ny Trass Tsiadana anio alina. Fotoana hiarahan’i Nini sy ireo mpitendry ahitana an-dry Joce, ry Johnny… Hanakoako mandritra ny takariva io araka izany ireo hira nahafantarana ny tarika kiaka, na ireo milamindamina toa ny « Fitia nindramina », « Lasa », « Atolotro ho anao »… na ireo voasokajy ao anatin’ny rock mavesatra raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Soavaly metaly », « Sabotsy alina »…
Mandalo eto an-tanindrazana ary hanolotra indray ny talentany ho an’i mpankafy azy i Dekapy. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoanany, ny seho ataony sy ny ekipany ao amin’ny tarika Dekapy’s Band etsy amin’ny Piment Café Behoririka, anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Hisongadina mandritra ny seho ireo hira noforonin’ity mpitendry gitara havia izy, tamin’ireo tarika efa handalovany. Ho fohazin’i Dekapy sy ireo mpitendry miaraka aminy ahitana an-dry Eddy (Inox), Faniry…, ary hiangaliany amin’ny endrika hafa ireo hira noforonin’i Thierry Dekapy toa « Fanenenana », « Vetivety », « Mivaona »… niangalian’ny tarika Green, Apost… Amin’ny seho takariva toa izao anefa, dia hivelatra amin’ny mozika rock hafa ny seho.
Karibotel – Analakely
Mpanakanto fantatra amin’ireo hiran’ny fo. Tsy tazana firy teo amin’ny sehatry ny fampisehoana i Tovo J’hay. Na izany aza, manohy hatrany ny fihaonana amin’ny mpankafy amin’ireo seho takariva izy. Anisan’izany izay hotanterahiny anio alina etsy amin’ny TwentySix Analakely ao amin’ny Karibotel. Toa ny mahazatra azy, dia hifantoka betsaka amin’ny fiangaliana ny hirany i Tovo J’hay, ary hanakoako mandritra ny seho ireo hira nahafantarana azy toa ny « Tampoka avy teo », « Tsy misy toa anao », « Teny mamy »…
Andriambavilanitra mpanakanto, fantatra amin’ny fahaizana manafana lanonana. Hanafana indray ny sehatry ny Jao’s Pub anio alina i Farah John’s. Mpanakanto kalaza amin’ny fiangaliana mozika mafana. Nahafantarana azy hatramin’izay ny fanentanana ny rehetra hitsangana handihy amin’ireo hira ataony. Anisan’ireo tsy mampitombona ny mpijery amin’ny fampisehoana ataony, ary hiangaliny mandritra io takariva io ny « Assurée », « Mandeha tsara », « Confiance »… Na izany aza, entiny eny anelanelany eny ireo hira somary milamindamina toa ny « Hafagnana », « Tambatambaza »…
Mitohy ary mihamafy orina ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa sy miombon’antoka eo amin’i Madagasikara sy Sina. Ankoatra ireo tetikasa maro avy amin’ny firenena sinoa ho an’i Madagasikara, izay nohamafisin’ny minisitry ny Raharaham-bahinin’izy ireo, Wang Yi, ...Tohiny